बच्चाहरु संग रोम को यात्रा | यात्रा समाचार
बच्चाहरूको साथ रोम यात्रा
मारिएला क्यारिल | | रोम, बच्चाहरूसँग यात्रा गर्दै
आज युवा परिवारहरू बच्चाहरूसँगै यात्रा गर्छन्, र धेरैले विचार गर्छन् कि उनीहरूसँग भेटघाट गर्न सकिने त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन। ए तेसो पो? मसँग मेरो शंका छ, तर मँ विचार गर्दछु कि केहि गन्तव्यहरु अरु भन्दा राम्रो छ। उदाहरण को लागी, के तपाईं बच्चाहरु संग रोम यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ?
उत्तर हो हो, यद्यपि तपाईंले बस्नु पर्छ र शहरले उनीहरूलाई के प्रस्ताव गर्दछ भनेर हेर्नुपर्दछ किनकि उनीहरू उत्सुक छन्, यो सत्य हो, तर इतिहास वा कलाले उनीहरूलाई खासै चासो लिन सक्दैन। योजना गर्न। यो शब्द हो जब यो आउँछ बच्चाहरु संग यात्रा।
बच्चाहरु संग रोम
रोम युरोपको महान् राजधानीहरू मध्ये एक हो र शताब्दीयौंको इतिहास छ जुन प्रत्येक कुनामा अवस्थित छ। इतिहास वा कलाको प्रेमी यस सहरमा हिंड्दै छ तर साना के गर्ने के गर्ने?
हामीले माथि भनेका थियौं कि तपाईंले बेक्नु पर्छ र यो यसरी नै हो। बच्चाहरूलाई लामो रेखा वा प्रतीक्षा मनपर्दैन त्यसैले यो सल्लाह दिइन्छ अग्रिम टिकट किन्नुहोस् कुनै पनि लामो पर्खाइबाट बच्न। पहिलो कुरा त त्यसो हो कोलोसियमलाई थाहा छ। टिकटहरू अनलाइन उपलब्ध छन्, तर यदि तपाईंसँग यो छैन भने, फोरम वा प्यालाटिन हिलमा दक्षिण प्रवेशद्वारमा थोरै मानिस छन् त्यसैले तपाईं लाभ लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई यहाँ खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ धेरै प्रकारका छन् निर्देशित भ्रमणहरूs र तपाईं कोलोजियम र फोरमको एक परिवार-प्रकार यात्रा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यो भग्नावशेष प्राय: निराश हुँदैन, यसको विशाल महिमाको साथ कोलोसियम कम। तिनीहरू यसलाई प्रेम गर्न जाँदैछन्! विशेष गरी यदि भ्रमणले तपाईंलाई बेसमेंटमा वा माथिल्लो भागहरूमा लैजान्छ जहाँ दृश्यहरू राम्रो छन्।
हामीले यो भनेनौं तर कोलोसियम, फोरम र प्यालाटिन हिल सबैको टिकट समान छ त्यसैले भ्रमण अधिक खंडहरको साथ, यहाँ जारी रहन्छ। यदि यो एक घमाइलो दिन हो भने यो सबै बाहिर छ, त्यसैले यो सुन्दर छ। प visits्क्तिमा तीन पटक भ्रमण गर्नु थकाइलाग्दो हुन सक्छ त्यसैले उनीहरू बीच खाजा खाने सल्लाह दिइन्छ ताकि बच्चाहरू आराम गर्न सकून्।
कोलोसियम धेरै पूर्ण छ तर फोरम एकदम अव्यवस्थित खंडहरहरूको सेट हो र कल्पनाको लागि खुला छ। एक राम्रो विचार भनेको फोरमले शताब्दी पहिले जस्तो देखिएको यात्रा गर्नु अघि उनीहरूलाई देखाउँनु वा प्ले गर्न र तुलना गर्न सक्षम हुन छविलाई तपाईंको मोबाइलमा डाउनलोड गर्नु हो। यस ट्रिपल भ्रमणको सबै भन्दा राम्रो अन्त्य अन्तत: पालाटाइन हिलको माथिको टु finish्गोमा पुग्नु हो जहाँबाट तपाईंलाई अन्य दुई साइटहरूको महान विचारहरू छन्।
कोलोसियम र भिट्टोरियो इमानुएल स्मारक बीच एक फराकिलो र लामो सडक छ। यहाँ हिंडेर तपाईं को भग्नावशेष हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राजनको बजार जुन करिब १०० एडीमा निर्माण गरिएको थियो र जहाँ करिब १ 100० वटा पसल र कार्यालयहरू सञ्चालित थिए। यो एक साइट थियो जुन हेर्नको लागि केहि हुनुपर्छ। नजिकैको पनि छ सर्कस म्याक्सिमस।
सर्कस म्याक्सिमस ठाउँ लिन प्रयोग गर्‍यो रथ दौड। आज मुख्य ट्रेस लामो र साँघुरो इलाकामा डुबेको छ। थोरै कल्पना को साथ एक राम्रो बेन-हूर शैली मा ती शानदार र शोर दौड पुन: सिर्जना गर्न सक्छन्। साथै, कहिलेकाँही घटनाहरू यहाँ भित्र आयोजित हुन्छन्, यदि त्यसो हो भने, तपाईं माथि आउन सक्नुहुन्छ र वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ।
साथै नजिकै भग्नावशेषको अर्को सेट छ: कराकल्लाको नुहाउने ठाउँ। तिनीहरू विलासी भएको हुनुपर्छ तर केही खडा भित्ताहरू र तिनीहरूको मोजाइकको साथ पोखरीको अवशेष मात्र बाँकी छ। तातो स्प्रि .हरू विशाल थियो र सर्कस म्याक्सिमसबाट १ only मिनेट मात्र हिंड्न सकिन्छ। त्यहाँ सामान्यतया ढोकामा आइसक्रीम स्टल हुन्छ र सुपर स्वादिष्ट हुन्छ, त्यसैले तपाईं यहाँ "टेक्निकल स्टप" बनाउन सक्नुहुन्छ जुन बच्चाहरूले प्रशंसा गर्नेछन्।
यी थर्मल स्नान थिए एडी २१217 मा सम्राट काराकल्लाद्वारा निर्माण गरिएको। लामो समयसम्म रोमको पतन भएपछि पानी फुट्यो र यो साइट मध्य युगका घरबारविहीन मानिसहरूले प्रयोग गर्न थाले, कसै-कसैले घरहरू बनाउन ढु stones्गा लगे र छोटकरीमा भन्नुपर्दा, यो यत्तिको यत्तिकै थियो। दिन राम्रो कुरा के हो भने त्यहाँ चारैतिर चिह्नहरू छन् यो कथा भनिन्छ ताकि तपाईं धैर्यतापूर्वक आफ्ना बच्चाहरूलाई यो भन्न सक्नुहुन्छ।
थप रूपमा, हालका वर्षहरूले एक प्रस्तुत गरेको छ भर्चुअल वास्तविकता भ्रमण। भ्रमण अडियो भिजुअल हो र तपाईं बाथरूम उनीहरूकै उत्तममा कस्तो देखिन्थ्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बच्चाको लागि अविस्मरणीय हो, तपाईलाई लाग्दैन?
मलाई लाग्छ कि मूल रूपमा यी साइटहरूका साथ बच्चाहरूको लागि पुरानो रोम कभर गरिएको छ। यदि तपाईंसँग अधिक समय छ भने, तपाईं जहिले पनि बाइक भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ र अप्पियन वेमा हिड्न जान सक्नुहुन्छ वा एक शोभनीय शाही विला भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, तर थोरै समयको साथ वा केटाकेटीहरूसँग पुरानो रोमीमा रुचि छैन, यो पर्याप्त छ। अब तपाइँ मा जानु पर्छ क्रिश्चियन रोम र यहाँ फेरि हेर्नको लागि धेरै चीजहरू छन् त्यसैले तपाईंले चयन गर्नुपर्नेछ।
तपाइँसँग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भ्याटिकन जुन क्याथोलिक धर्मको मुटु हो। तपाईं वर्गमा जान सक्नुहुन्छ र यसको वरपरका स्टालहरूमार्फत हिंड्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं अझ एक कदम लिन सक्नुहुन्छ र भ्याटिकन संग्रहालयहरूको भ्रमण गर्नुहोस्। यहाँ संसार भर बाट खजाना छन् र प्रसिद्ध छ सिस्टिन चैपल। एक घण्टासम्म हिंड्न सक्छ र सबै कुरा कहिले थाहा पाउँदैन, यो सत्य हो, तर टिकट र लाम किन्न यो खराब विचार होइन। त्यहाँ छन् बच्चाहरूको लागि यात्रा।
La सेन्ट पीटर को बासिला यसले भ्याटिकनको भ्रमणलाई बन्द गर्न सक्दछ र स्विस गार्डको साथ फोटो नै उत्तम स्मारिका हुन सक्छ। यदि बच्चाहरूसँग उर्जा छ भने तपाईं चर्चको डोममा चढ्न सक्नुहुन्छ र रोममा टकटकी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अविस्मरणीय कुरा।
या त भ्याटिकन अगाडि वा पछाडि तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ क्यास्टेल सन्त'एन्जेलो। प्रवेशद्वारको अगाडि मूर्तिहरूले सजिएको एउटा पूल छ। यो महल एक papal किल्ला हुन प्रयोग गर्‍यो र त्यहाँ एक गोप्य सुरुnel छ जुन यसलाई भ्याटिकनसँग जोड्छ। आज एउटा संग्रहालयले काम गर्दछ र सबै चीजको राम्रो दृश्य राख्न यसलाई खुला टेरेस पनि छ। र के को बारेमा Pantheon? यहाँ पुरानो रोमले इसाई रोमलाई भेट्छ।
यो एक उत्तम संरक्षित शास्त्रीय रोमानी भवन हो जुन १२० एडीमा पर्दछ। भित्री भाग भव्य र सूर्यको किरण हो वा छानाको प्वालबाट वर्षा ट्रिक्ल्स हुन्छ, यदि तपाईं अशुभ हुनुहुन्छ र तपाईंको भ्रमणको दिनमा पानी परेको छ भने। यहाँ राफेल टल्दछ त्यसैले तपाईं खोज्नु पर्छ र जानु भन्दा पहिले उनको चिहान। अन्तमा, त्यहाँ बाहिर खाने र खाने धेरै ठाउँहरू छन् त्यसैले यो अर्को राम्रो ठाउँ हो।
स्पष्ट रूपमा रोम चर्चहरूले भरिएको शहर हो। यदि मैले केहि पत्ता लगाएको छु भने यो हो कि ती सबै राम्रा छन् र धेरै स्वतन्त्र र अज्ञात छन्। फोरमको नजीक दुईवटा साना र सुन्दर चर्चहरू छन्, तर यदि तपाईं केहि बढी लोकप्रिय चाहनुहुन्छ भने सान्ता मारिया मैग्गीओर मोजेक कलाको साथ तपाईंको सास टाढा छ र अर्को चाखलाग्दो हुन सजिलो छ Cosmedin मा सान्ता मारिया को चर्च।
यो कहाँ छ त्यहाँ सत्यको प्रसिद्ध मुख छचर्चको निर्माण हुनुभन्दा पहिले। तपाईंले यसलाई सर्कस म्याक्सिमसको नजिक फेला पार्नुभयो, प्लाजा डे ला बोका डे ला वरददमा। यदि तपाइँका बच्चाहरु लाई यो मन पर्छ मकाब्रे एउटा क्राइप रोममा केटाकेटीसँग के भ्रमण गर्ने भन्ने सूचीमा हुनुपर्दछ। तपाई छनौट गर्न सक्नुहुन्छ भिक्षुहरूको क्रिप्ट Cappuccinos, छ हड्डीहरूले भरिएको कोठा र केहि अवशेषहरू छन् कि एक साइट छ।
La Villa Borghese र यसको बगैंचा, ट्रेवी फाउंटेन र बाहिरी इलाकामा केहि भ्रमणहरू समावेश गर्न सकिन्छ। ओस्टिया एन्टिका, लास पोम्पेई खंडहर वा अगाडि, Florencia, हात मा छन्।
मलाई लाग्छ बच्चाहरूसँग यात्रा गर्दा योजनाको आवश्यक हुन्छ ठिक छ, तपाईको जीवनको सर्वश्रेष्ठ छुट्टीहरू उनीहरूलाई अनुभवहरू प्रदान गरेर व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। यो केवल हिड्ने वा हेर्नेको बारेमा मात्र होइन, तर यो गर्ने बारे हो: अप्पियन वेमा बाइक चलाउने, कोलोसिअममा ग्लेडिटर खेल्दा, पिज्जा वा पास्ता वर्गको लागि साइन अप गर्दै ...
बच्चाहरूसँग यात्रा गर्न नछाड्नुहोस्। यो राम्रो हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » बच्चाहरूसँग यात्रा गर्दै » बच्चाहरूको साथ रोम यात्रा
व्रोकलामा के हेर्ने